25 martsa: Fankalazana ny nilazana fa naka nofo ny Tompo – Trinitera Malagasy
Vakiteny II : Hebrio 10,4-10
Efa hatry ny ela, efa tany amin’ny taonjato IV tany ho any no efa nankalazana ity fety ity, Fetin’ny Tompo, izay noraiketina ny 25 martsa nandritra ny Taonjato VII, rehefa nahazo vahana ny fankalazana ny Noely ny 25 desambra. Saingy noho ny fitomboan’ny “fanajana an’i Masina Maria”dia niova tsikelikely ka lasa fetin’i Masina Maria io fety io. Ankehitriny, taorian’ny Konsily Vatikana II, dia niverina hoe fankalazana ny “nilazana fa naka nofo ny Tompo”, fetin’ny Misterin’ny fgahatongavana ho nofo. Fototry ny finoantsika manko ny maha-olombelona an’i Jesoa, ilay zanak’Andriamanitra, tena Andriamanitra. Fandalinana sy fampianarana mikasika izany maha-Andriamanitra sy maha-olombelona an’i Jesoa izany no nimasoan’ny Fiangonana hatrany am-piandohana. Na ny drafitra narahan’i Md Lioka amin’ny fanoratana ny Evanjeliny aza dia manampy antsika hahazo izany Mistery izany, ka hampihatra azy amin’ny fomba fiainana andavanandro.
Hanahaka an’i Masina Maria anie isika hanetry tena [izany hoe hankatò ny herin’Andriamanitra mandahatra ny zavatra rehetra] sy hiraiki-po amin’izay sitrak’Andriamanitra ary ny fanajana azy sy ny fanaovana sapile matetika anie hanampy antsika
FANDALINANA : Jereo eto